A Social Worker, a Catholic, and a Muslim | Bible Changes Lives
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lingala Lithuanian Malagasy Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swedish Tagalog Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
NÁ ASETENA kɔ yiye ma ababaa bi a ɔmfa Onyankopɔn nyɛ hwee; ɛyɛɛ dɛn na obehui sɛ asetena pa bi wɔ baabi? Dɛn na Katolekni aberante bi sua faa owu ho a ɛsesaa n’abrabɔ? Na dɛn na aberante bi a na onhu ɔbra ani so sua faa Onyankopɔn ho a enti ɔbɛyɛɛ Kristoni? Kenkan saa nnipa yi anom asɛm.
“Mibisaa Me ho Mfe Pii Sɛ, ‘Adɛn Nti na Yɛwɔ Ha?’”​—ROSALIND JOHN
AFE A WƆWOO NO: 1963
ƆMAN A OFI MU: BRITAIN
TEBEA A NA ƆWOM: NÁ ƆYƐ ADWUMA KƐSE BI
Wɔwoo me wɔ Croydon wɔ South London. Ná yɛyɛ mmofra baakron, na me na na meto so asia. Baabi a m’awofo fi paa ne Caribbean nsuano man bi a wɔfrɛ no St. Vincent. Ná me maame kɔ Metɔdist asɔre. Me de, na mepɛ adesua paa, nanso na m’ani nnye ho sɛ mesua Onyankopɔn ho ade. Edu akwamma bere a, na metaa kɔtena ɔtare bi ho kenkan nhoma pii a makogye afi nhomakorabea.
Miwiee sukuu mfe bi akyi no, na mepɛ sɛ meboa mmɔborɔwafo. Me ne adwumakuw bi yɛɛ adwuma, na na wɔboa adedamfikyifo ne wɔn a wɔadi dɛm ne wɔn a ɛyɛ den sɛ wobesua ade ate ase. Afei mekɔɔ sukuupɔn kosuaa apɔwmuden ho ade. Miwiee sukuu no, minyaa dibea akɛse, na mifii ase dii yiye wɔ asetenam. Me ara na na meyɛ m’adwuma, na na nkurɔfo bɛfa me ma meyɛ adwuma ma wɔn, enti nea na mihia ara ne me kɔmputa ketewa ne Intanɛt. Ná metaa tu kwan kɔ amannɔne kodi mmere kakra; ná mewɔ hotɛl fɛfɛ bi a mepɛ hɔ tena paa, na na baabi kama bi wɔ hɔ a mekɔ ma wɔtwetwe me na meteɛteɛ m’apɔw mu. Ɛyɛɛ me sɛ biribiara nhia me bio. Ne nyinaa mu no, me werɛ amfi onnibiefo.
Ade biako a midwen ho mfe pii ne sɛ, ‘Adɛn nti na yɛwɔ ha, na yɛbɛyɛɛ dɛn wɔ wiase?’ Nanso manyɛ m’adwene da sɛ mɛhwehwɛ mmuae no wɔ Bible mu. Ná me nua Margaret abɛyɛ Yehowa Dansefo, enti afe 1999 mu no, da bi, mewɔ hɔ ara na ɔne n’adamfo bi a ɔno nso yɛ Ɔdansefo bɛsraa me, na n’adamfo no tew n’anim maa me. Nea mihui ara ne sɛ mapene so sɛ n’adamfo no ne me mmesua Bible, nanso mannya nkɔso ntɛm efisɛ na m’adwuma ne m’asetena gye me bere pii.
Afe 2002 ahohuru bere mu na mitu kɔtenaa England anafo fam. Ɛhɔ na mekɔɔ sukuupɔn bi sɛ merekosua ade anya abodin kɛse wɔ nnipa asetena mu nsɛm mu. Me ne me babarima fii ase kɔɔ Ahenni Asa so ntɛmntɛm kyɛn kan no. Ɛwom sɛ na m’ani gye nhomasua a ɛkɔ akyiri ho de, nanso Bible a na meresua no ma mihuu nea ɛma nnipa hu amane ne nea ebeyi nnipa amanehunu afi hɔ. Mihui sɛ asɛm a ɛwɔ Mateo 6:24 no yɛ nokware sɛ, wuntumi nsom awuranom baanu. Onyankopɔn ne ahonyade, na ɛsɛ sɛ miyi biako. Mihui sɛ ɛsɛ sɛ meyɛ nea ehia ansa na mayɛ nea ɛfata.
Afe 2001 mu no, na Yehowa Adansefo bi hyiam wɔ obi fie sua nhoma a wɔato din Is There a Creator Who Cares About You? * no, na na metaa kɔ bi. Mibegye dii paa sɛ Ɔbɔadeɛ Yehowa nko ara na obetumi ayi adesamma haw afi hɔ. Nanso wɔkyerɛkyerɛɛ me wɔ sukuupɔn sɛ ɛnyɛ Ɔbɔadeɛ biara na ɔma yɛn ani gye wɔ wiase. Ɛyɛɛ me abufuw pii. Mekɔɔ sukuupɔn no asram abien pɛ no, migyaee, na misii m’adwene pi sɛ mede me bere pii bɛsom Onyankopɔn.
Bible mu asɛm a ɛboaa me paa ma mesesaa m’abrabɔ ne Mmebusɛm 3:5, 6. Ɛhɔ ka sɛ: “Fa wo koma nyinaa to Yehowa so, na mfa wo ho ntweri w’ankasa ntease. Hu no w’akwan nyinaa mu, na ɔno na ɔbɛma w’akwan ateɛ.” Bere a misuaa ɔdɔ Nyankopɔn no ho ade pii no, mihui sɛ mfaso wɔ so sen ahonyade ne abodin biara a sukuupɔn de bɛma me. Bere a misuaa Yehowa adwene a ɔde bɔɔ asase ne sɛnea Yesu de ne ho bɔɔ afɔre maa yɛn no, ɛmaa me ho peree me sɛ mede me ho nyinaa bɛma Ɔbɔadeɛ no. Mebɔɔ asu April 2003. Efi saa bere no, mifii ase yɛɛ me ho awiɛmfoɔ.
Me ne Yehowa ayɔnkofa no de, hwee ne no nsɛ. Yehowa a mabehu no no ama manya asomdwoe ne akomatɔyam pii. Afei nso, Onyankopɔn nokware asomfo a me ne wɔn bɔ no ma minya anigye kɛse.
Nea misua fi Bible mu ne Kristofo nhyiam ase no ma mete nneɛma pii ase daa. Ɛyɛ me anigye sɛ meka me gyidi ho asɛm kyerɛ afoforo. Seesei ɛno ne adwuma a mereyɛ. Ɛno na ɛma mitumi boa nkurɔfo ma wonya asetena pa seesei na wonya anidaso sɛ wobetumi anya daa nkwa wɔ wiase foforo no mu. Efi June 2008 no, mabɛyɛ bere nyinaa somfo a mede bere pii ka asɛmpa no. M’ani gye, na mewɔ akomatɔyam pii sen kan no koraa. Mahu nea ɛma nnipa ani gye wɔ asetena mu, na ɛno nti meda Yehowa ase pii.
“M’adamfo no Wu no Bubuu Me.”​—ROMAN IRNESBERGER
AFE A WƆWOO NO: 1973
ƆMAN A OFI MU: AUSTRIA
TEBEA A NA ƆWOM: NÁ ƆTOW KYAKYA
Wɔtetee me wɔ Austria kurow ketewa bi a wɔfrɛ no Braunau mu. Ná ɛhɔ yɛ asikafo mu, na na nsɛmmɔnedi nnɔɔso wɔ hɔ. Ná m’awofo yɛ Katolekfo, enti Katoleksom na wɔde tetee me.
Asɛm bi sii me mmofraberem, na ɛkaa me paa. Afe 1984 mu, bere a madi mfe 11 no, me ne me yɔnko berɛbo bi kɔbɔɔ bɔɔl. Saa da no ara awia na onyaa kar akwanhyia wui. M’adamfo no wu no bubuu me pasaa. Akwanhyia no sii mfe pii akyi no, mibisaa me ho sɛ, sɛ yewu a ɛhe koraa na yɛkɔ?
Miwiee sukuu no, na meyɛ anyinam nkanea ho adwuma. Ná kyakyatow adidi mu me ara ma mede sika pii gu so, nanso na me ho nkyere me sikasɛm mu. Ná mesɛe m’adagyew pii wɔ agodi ho na m’ani begyee nnwom a ano yɛ den ho (nea wɔfrɛ no heavy metal ne punk rock no). Disko ne apontow de, na mefa no kwa. Anigyede ne ɔbrasɛe nko ara na na mewom, nanso na wiase nyɛ me dɛ.
Afe 1995 no, Ɔdansefo bi a n’ani afi bɛbɔɔ me pon mu, na ɔde nhoma bi kyerɛɛ me a na nhoma no ka Bible no adwene wɔ asɛmmisa yi ho, Nnipa wu a, ɛhe na wɔkɔ? Ná m’adamfo no wu no da so haw me paa, enti migyee nhoma no. Ɛnyɛ baabi a ɛka owu ho mu asɛm no nko ara na mekenkanee na mmom mekenkanee nhoma no nyinaa!
Nea mekenkanee no ma minyaa owu ho nsɛm a na mibisa no ho mmuae. Misuaa nneɛma pii nso kaa ho. Esiane sɛ wɔtetee me wɔ Katolek som mu nti, Yesu na na migye no di paa. Nanso Bible no a misua kɔɔ akyiri no boaa me ma me ne Yesu Agya Yehowa Nyankopɔn bɛyɛɛ adamfo paa. Mibehui sɛ Yehowa mfa ne ho nsɛm nsie nnipa, na mmom ɔma wɔn a wɔhwehwɛ n’akyi kwan no nyinaa hu no. (Mateo 7:7-11) Mihui sɛ Yehowa wɔ atenka. Mesan hui sɛ odi ne bɔhyɛ so bere nyinaa. Ɛno boaa me ma medɔɔ Bible nkɔmhyɛ ne sɛnea ɛbam no mu asukɔ. Nea misuae no ma minyaa Onyankopɔn mu gyidi kɛse.
Ankyɛ na mihui sɛ Yehowa Adansefo nkutoo na wɔayi wɔn yam pɛ sɛ wɔboa nkurɔfo ma wɔte Bible no ase. Mihuu kyerɛw nsɛm a na ɛwɔ Adansefo no nhoma mu no, na mekenkanee ne nyinaa wɔ me Katolek Bible no mu. Bere a mehwehwɛɛ mu kɔɔ akyiri no, mibehui sɛ ɛno ne nokware no.
Bible a misuae no kyerɛɛ me sɛ Yehowa pɛ sɛ mebɔ me bra sɛnea wakyerɛ. Nea mekenkan fii Efesofo 4:22-24 no ma mihui sɛ ɛsɛ sɛ miyi me “nipasu dedaw” a ɛne me “kan abrabɔ” hyia no gu na mehyɛ “nipasu foforo a wɔbɔɔ no sɛnea Onyankopɔn pɛ” no. Enti migyaee ɔbra bɔne a na mewɔ mu no. Mihui nso sɛ ɛsɛ sɛ migyae kyakyatow no efisɛ ɛhyɛ adedodowpɛ ne adifudepɛ ho nkuran. (1 Korintofo 6:9, 10) Mihui sɛ, sɛ metumi ayɛ saa nsakrae no de a, gye sɛ me ne me nnamfo dedaw no gyae bɔ na mefa nnamfo foforo a wɔn nso pɛ sɛ wɔyɛ nea eye.
Nsakrae no anyɛ mmerɛw koraa. Nanso mifii ase kɔɔ nhyiam wɔ Adansefo no Ahenni Asa so na minyaa nnamfo foforo wɔ asafo no mu. Metoaa so suaa Bible no wɔ fie a obiara ammoa me. Ɛno ma migyaee nnwom a na mitie no sesaa botae a na esi m’ani so no, na mifii ase siesiee me ho yiye. Mebɔɔ asu afe 1995 bɛyɛɛ Yehowa Dansefo.
Seesei manya adwene a ɛfata wɔ sika ne ahonyade ho. Bere bi na me bo nkyɛ fuw, nso seesei de, mewɔ abotare. Afei nso, nea ebesi daakye nyɛ me adwennwene bio.
Ɛyɛ me dɛ sɛ meka nnipa a wofi amanaman mu resom Yehowa no ho. Obiara wɔ ne haw, nanso wogu so de nokwaredi resom Onyankopɔn. M’ani agye paa ma enti seesei mede me bere ne m’ahoɔden nyinaa som Yehowa de bi yɛ nkurɔfo papa na memfa nyɛ nea me ara mepɛ.
“Afei de, M’asetena Abɛyɛ Papa.”—IAN KING
ƆMAN A OFI MU: ENGLAND
TEBEA A NA ƆWOM: NÁ ONHU ƆBRA ANI SO
Wɔwoo me wɔ England, nanso midii bɛyɛ mfe ason no, yɛn abusua no tu kɔtenaa Australia. Baabi a yɛtenae wɔ Queensland, Australia no, wɔfrɛ hɔ Gold Coast, na ɛhɔ yɛ baabi a ahɔho taa kɔhwehwɛ hɔ. Ná yɛnyɛ asikafo, nanso na biribiara nhia yɛn.
Ɛwom, manhu ohia, nanso na minni anigye. Ná minhu ɔbra ani so koraa. Ná me papa nom nsã paa. Sɛnea na ɔpɛ nsã ne nea na ɔde yɛ me maame nti, na mempɛ n’asɛm. Akyiri yi, mibehui sɛ bere a ɔyɛ ɔsraani wɔ Malaya no, nneɛma a ɔfaa mu no nti na na ɔyɛ n’ade saa, na ɛno na ɛma metee n’ase kakra.
Bere a mewɔ ntoaso sukuu no, mifii ase wee nsã. Midii mfe 16 no, migyaee sukuu kɔdɔm po so asraafokuw. Mifii ase nom nnubɔne nkakrankakra, na akyiri yi, tawanom kaa me hɔ. Eduu baabi no, na mede nsã ayɛ aduan. Ahyɛase no de, na nnawɔtwe awiei na mewe nsã no, nanso eduu baabi no, na ayɛ daa-sram.
Midii bɛyɛ mfe 20 no, mibenyaa adwene sɛ Onyankopɔn nni hɔ. Mibisaa me ho sɛ, ‘Onyankopɔn wɔ hɔ a, ɛnde adɛn nti na ɔma nnipa hu amane na wowu?’ Mekyerɛw anwensɛm mpo de kyerɛe sɛ bɔne a ɛrekɔ so wɔ wiase no nyinaa fi Onyankopɔn.
Midii mfe 23 no, migyaee sraadi no. Ɛno akyi no, meyɛɛ nnwuma pii, na mituu kwan mpo kɔɔ amannɔne kodii afe, nanso emu biara amma m’ani annye. Ná biribiara nka me sɛ memfa botae bi nsi m’ani so. Biribiara anyɛ me fɛ. Ná ɛho nhia me sɛ menya m’ankasa me fie anaa adwuma pa anaa dibea biara wɔ adwuma mu. Minya me nsã nom na minya nnwom tie a, minnwen hwee bio.
Mekae bere bi a ɛbaa me komam paa sɛ mehu nea enti a yɛbaa wiase. Saa bere no na mewɔ Poland; mewɔ hɔ no, mekɔɔ Auschwitz nneduaban a wɔyɛɛ nneɛma bɔne paa wɔ hɔ no kɔhwehwɛɛ hɔ. Ná makenkan atirimɔdensɛm a ɛkɔɔ so wɔ hɔ no ho asɛm. Nanso bere a mikoduu hɔ a mihuu sɛnea nneduaban no sõ no, me werɛ howee paa. Mante ase sɛ onipa tumi yɛ ne yɔnko nipa aninyanne saa. Bere a menam nneduaban no mu nyinaa na meretew nusu, na mibisae sɛ, ‘Adɛn?’
Afe 1993 a na mifi amannɔne aba no, mifii ase kenkan Bible de hwehwɛɛ me nsɛmmisa ho mmuae. Ankyɛ na Yehowa Adansefo baanu bi bɛbɔɔ me pon mu, na wɔtoo nsa frɛɛ me sɛ memmra nhyiam bi a wɔrebɛyɛ wɔ agodibea bi a ɛbɛn hɔ. Mekɔe.
Ná mekɔhwɛɛ agoru bi wɔ agodibea hɔ nkyɛe, nanso nea mihui wɔ nhyiam yi ase de, na ɛyɛ soronko koraa. Mihui sɛ Adansefo no bu ade, na wɔasiesie wɔn ho yiye, na wɔn mma nso nyɛ basabasa. Afei nso eduu awia ahomegye bere no, mihuu biribi maa me ho dwiriw me. Adansefo bebree tenaa agoprama no so didii, nanso bere a wowiei a wɔsan kɔtenaa ase no, manhu wura biako mpo wɔ prama no so! Ade biako a ɛyɛɛ me fɛ paa ne sɛ na mihu sɛ wɔwɔ biribi a merehwehwɛ—akomatɔyam ne asomdwoe. Menkae kasa a saa da no wɔmae no biako mpo, nanso suban a Adansefo no daa no adi no kaa me koma paa.
Saa anwummere no, mekaee me sewaa ba bi a na ɔkenkan Bible na osua ɔsom pii ho ade. Mfe bi a atwam no, ɔka kyerɛɛ me sɛ Yesu aka sɛ nea yɛde behu nokware asomfo ne wɔn aba. (Mateo 7:15-20) Meyɛe sɛ mɛhwehwɛ nea ɛma Adansefo no yɛ soronko saa no. Saa bere no ne bere a edi kan wɔ m’asetena mu a minyaa awerɛhyem ne anidaso kakra.
Nnawɔtwe a edi hɔ no, Adansefo baanu a wɔtoo nsa frɛɛ me baa nhyiam no ase no san bae. Wɔkae sɛ wɔpɛ sɛ wɔne me yɛ Bible adesua, na mepenee so. Mifii ase ne wɔn kɔɔ Kristofo nhyiam nso.
Migu so resua Bible no, Onyankopɔn ho adwene a mewɔ no sesae koraa. Mibehui sɛ ɛnyɛ ɔno na ɔde bɔne ne amanehunu ba, na ɔno mpo, nneɛma bɔne a nnipa yɛ no ma ne werɛ how. (Genesis 6:6; Dwom 78:40, 41) Meyɛɛ m’adwene sɛ mɛbɔ mmɔden sɛ menyɛ biribiara mfa nhyɛ Yehowa awerɛhow. Ná mepɛ sɛ mema ne koma ani gye. (Mmebusɛm 27:11) Migyaee asanom ne tawanom, na migyaee brabɔne. March 1994 na wɔbɔɔ me asu ma mebɛyɛɛ Yehowa Dansefo.
Manya anigye ne akomatɔyam paa. Seesei de, memfa me ho nto nsã so mfa nni me haw ho dwuma bio. Mmom no, masua sɛ mede me dadwen bɛto Yehowa so.—Dwom 55:22.
Mfe du ni a maware Ɔdansefo bea hoɔfɛfo bi a wɔfrɛ no Karen, na mewɔ abanoma bi a ne ho yɛ fɛ a wɔfrɛ no Nella. Yɛn baasa nyinaa ani gye Kristofo som adwuma no ho, enti yɛboa nkurɔfo ma wosua Onyankopɔn ho ade. Afei de, m’asetena abɛyɛ papa.
^ nky. 11 Yehowa Adansefo na wotintimii.
Bible Tumi Sesa Nnipa—November 2012
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN November 2012